Sharciga iyo qawaaniintu waxay ka samaysmaan dhacdooyinka waayaha W/Q Prof Omar Osman Hersi Xiis
Wednesday May 20, 2020 - 08:17:48 in Maqaallo by Wariye Tiriko
Sharciga iyo qawaaniintu waxay ka samaysmaan dhacdooyinka waayaha W/Q Prof Omar Osman Hersi Xiis Waxa maalmahan magaalada Burco isa soo taraya tallaabooyinkii lagu yiqiin ilbaxnimada. Bulsho waxay ilbax tahay marka ay sharciga.iyo qawaaniinta ehel ka dhigto. Sharciga.iyo qawaaniintuna waxay ka samaysmaan dhacdooyinka waayaha. Waxaynu maqlayney tabashooyinka dadweynaha ee adeegyada laydhka, biyaha iyo duruufaha la soo dersey macallimiinta.
Urukaas oo u adeegi doona danaha macallimiinta xubno ka noqda. Waa dariiqo ka mid ah kuwa lagaga gudbi karo keli doonashada, qabyaaladda iyo hamrashada wax aad xaq u leedahay. Waxa kuu doodaya Urur sharci ah oo aqoontii, sharcigii iyo dhaqaalihii uu kuugu shaqayn lahaaba aad ka heshiiseen. Ku naso qaddar aan badnayn oo qaadhaanka xubinnimada ururka ah (membership fee). Why do you need reer Hebel, when $5 can work for you?